Google SERP CTR nema Rank
Muvhuro, July 25, 2011 Muvhuro, June 10, 2013 Douglas Karr
Ndeipi yaive yakatarwa yekudzvanya-kuburikidza chiyero (CTR) curve ye organic US mhedzisiro yezvinzvimbo # 1-10 muKutsvaga Injini Mhedzisiro Peji (SERP)? Slingshot SEO yaita iyo yakawandisa kuongorora iyo data rakagadzirwa kuchishandiswa vanopfuura 170,000 vashanyi chaivo vashanyi pamakumi matatu nemaviri chetevere yakarongwa mazwi akakosha pamusoro pemwedzi mitanhatu. Kubva pane iyo data, Slingshot SEO yakacherekedza inotevera curve yeiyo Chaiyo CTR.
Ini ndinowanzoona SEO makambani achishambadza 'peji 1' mhedzisiro yevatengi vavo. Kana iwe ukatora chidzidzo uchifunga, izvo zvakafanana nekuvimbisa vatengi vavo 1% yekudzvanya-kuburikidza chiyero. Izvo zvinoshamisa here? Izvo zvinoenda kuratidza kuti kudyara mune imwe kambani iyo inogona kukuendesa kune iyo nhamba 1 chinzvimbo kwakakodzera kukosha kudyara kana iyo vhoriyamu yekutsvaga iripo kutsigira bhizinesi rako. Ichi chidzidzo chinoshamisa.
Kumwe kucherechedzwa kwekudzidza kwavo ndekwekuti yavo yekudzvanya-kuburikidza nemitengo yakaderera pane zvekare zvidzidzo. Ipo ivo vachiverengera izvi pane dhatabhesi, ini ndinowedzera kuti ndinotenda Google's yakashuma kiyi yekutsvaga mavhoriyamu kuti ive isiriyo. Mumwe muenzaniso izita: ndiani akandidzorera. Google inopa vhoriyamu yekutsvaga kwe1900 yekutsvagisa asi maWebmasters anoratidza iwo emwedzi manyorerwo ehuwandu hwe1,300, Iko kusiyana kukuru pakati penhamba mbiri idzi. Zvinokonzera kusagadzikana kwakawanda nevatengi vedu pavanenge vari pachinzvimbo chepamusoro asi vasingawani iyo chaiyo traffic iyo inoratidza kuti Google iripo!
Ini ndanzwa kubva kune vazhinji vevanhu kuti google inoratidza mhedzisiro isiriyo asi hapana mumwe wedu haana kana kuyedza kuti nei izvi zvichiitika uye izvo zvatinofunga kuti zvakanaka kana zvisizvo. Mune chaiyo google inoratidza mhedzisiro isiriyo kana isu takanganisa. Nekuti mukukwikwidza kwekukwira chinzvimbo chepamusoro uye traffic isu tinorasikirwa nehunhu nehuwandu. Saka izvi zvinoitika nekuda kwayo kana google zvisiri izvo. Zvino isu tinofanirwa kutsvaga chaicho chikonzero chiri chikonzero ichi.
seo chinongedzo chekuvaka sevhisi
Pakazara, izvi zvinoumba chete 52.34%, uko mamwe mabhatani aenda? Adwords kana ????
@ twitter-90853096: disqus Isu takanyora nyowani nyowani iyo inogona kupa imwe nzwisiso… yedu chepamusoro chinzvimbo inoratidza kuti ruzhinji rwekushanya kwedu kubva kumajini ekutsvaga kunobva kubva kuSERP zvinyorwa zvakadzama kupfuura izvi. Kunyange hazvo # 1 chinzvimbo chiri chikuru, zvinongonaka chete kana zvichinyanya kukodzera kune zvigadzirwa nemasevhisi auri kusimudzira.